UNksz Noluthando Patricia Mbeje usanda kuqeda iziqu zakhe zeMasitazi kwezeSayenzi yezobuDokotela.
Ucwaningo lwezifundo zobudokotela lwe-registrar yezomdlavuza ye-Multinational Lung Control Programme (e-MLCCP) eMkhakheni wezeMpilo yoMphakathi uNksz Noluthando Patricia Mbeje lugxile ekuphuculeni indlela yasesibhedlela yokubheka umdlavuza KwaZulu-Natali, ikakhulukazi ukuphelela nokwethembeka kwemininingwane yomdlavuza ezibhedlela.
Usanda kuphothula iziqu zeMastazi kwezeSayensi YezobuDokotela, i-MMedSci, ngaphansi kweso lakoDkt Nkosana Jafta Dkt Themba Ginindza.
Ucwaningo lwakhe, olusihloko esithi: “The burden of lung cancer and associated risk factors in KwaZulu-Natal”, beluqonde ukubheka ubukhona bazo zonke izinhlobo zomdlavuza ezibhedlela zikahulumeni eThekwini naseMgungundlovu, kubalwa nezingozi ezihambisana nomdlavuza wamaphaphu.
Loku kwenziwe ngokusungula indlela yokuhlola umdlavuza ezibhedlela zikahulumeni ezintathu kula madolobha amabili.
‘Ukuhlola umdlavuza esibhedlela kwenzeke ngempumeleo ezibhedlela ezintathu ezineminyango yokwelapha umdlavuza KwaZulu-Natali,’ kusho uMbeje.
Wengeze ngokuthi isibalo esiphezulu sabasanda kutholakala benomdlavuza ngowezi-2018 besiseNkosi Albert Luthuli Central Hospital (amaphesenti angama-65.3), kulandele i-Greys Hospital ngamaphesenti angama-30.8 bese kuba yi-Addington Hospital, yona enesibalo esiphansi, ngamaphesenti angama-3.94. Izinhlobo ezivamile zomdlavuza kuzona zontathu izibhedlela ngowebele, owesibeletho, iKaposi sarcoma, owomgudu oxhumanisa umlomo nesisu, owethumbu, owamadoda, owodonga lwethumbu nowezitho zabantu besifazane. Ngokuvama ngokweminyaka zonke izinhlobo zomdlavuza ngowezi-2018 bezingama-20.2 ebantwini abayizi-100 000 KwaZulu-Natali.
‘Ingxenye yocwaningo yezinto eziyingozi zomdlavuza wamaphaphu, ezaziwucwaningo lokuhlola, ithole ukuthi ukubhema ugwayi nokuhogela ugwayi obhenywa ngomunye umuntu yizona zizathu ezinkulu ezibanga umdlavuza,’ kusho uMbeje.
‘Ukuhlangana nezinye izinto kwandisa amathuba okuphathwa wumdlavuza wamaphaphu. Ukuphuza utshwala nomlando wesifo samaphaphu nako kuyizinto ezinkulu eziyingozi.’
Ukuhlola kulethe ulwazi olumqoka ngokuphathwa wumdlavuza ezibhedlela zikahulumeni KwaZulu-Natali kanti zingaba negalelo lokuqinisa umthetho wokwelapha umdlavuza kuzwelonke.
‘Imiphumela ngengozi izosiza ekuphuculweni komthetho nokuhlela izindlela zokwelapha ezithinta imithetho yokubhema, eyasemsebenzini neyezempilo,’ kusho uMbeje.